BUDDHIST TERMS' Dictionary: HEIR TO THE TEACHING - သာသနဒါယာဒ
HEIR TO THE TEACHING - သာသနဒါယာဒ
HEIR TO THE TEACHING Sᾱsanadᾱyᾱda
သာသနဒါယာဒ - သာသနာ့အမွေခံ။
(၁) မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမတော်များသည် သာသနာ့အမွေမည်၏။ ထိုအမွေကို ခံယူသူသည် သာသနာ့အမွေခံ ဖြစ်သည်။
(၂) ရှင်, ရဟန်းများနှင့် ရှင်ဒါယကာ, ရဟန်းဒါယကာများသည် သာသနာ့အမွေခံ မည်၏။
(1) The teachings of the Buddha are the legacy of the Buddha. Those who inherit them are the heirs to the Buddha’s Teaching.
(2) Bhikkhus and lay supporters who sponsor boys into novicehood and novices into bhikkhuhood are heirs to the Buddha’s Teaching.